အင်းယားလမ်းက ချစ်ဇာတ်လမ်း – Grab Love Story
မ … အဝတ်တွေ လဲလိုက်ပါလားဟင် … ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆို …”
“အင်း … မောင် … အပြင်ခဏထွက်ပေးနော် …”
“နောက်ဖေးမှာ သံပုရာသီးရှိလား …”
“အော် … မောင့်မိန်းမက … ခေါင်းကိုက်နေတယ်မှတ်လား … သံပုရာရည်လေး ဖျော်တိုက်မလို့ပါဗျာ”
“ဘာ … မောင့်မိန်းမလဲ … ဟွန့် …”
“မဟုတ်လို့လား … မရယ် … ဟောဒီမှာကြည့်ပါအုံး … လက်ထပ်စာချုပ် … မ နော် … အခုမှ … ဘွာတေးမလုပ်နဲ့ …”
“ဟာကွာ … မောင်နော် … သိပ်မစနဲ့ကွာ … တို့ အရမ်းရှက်တယ် … ခဏအပြင်ထွက်ပေးနော် …”
“အင်းပါ … အင်းပါ … သံပုရာသီး ဘယ်နားထားလဲဟင်”
“အိုကေ … ဖြေးဖြေးလဲနော်”
မောင် … တံခါးလေးပိတ်ပြီး … အပြင်ထွက်သွားတယ် … ရင်စေ့အင်္ကျီလေးကို … ချွတ်လိုက်ပြီး … အောက်ခံဘော်လီကို … ဝတ်သင့်မဝတ်သင့် … စဉ်းစားလိုက်ပါသေးတယ် … ကျွန်မတကိုယ်လုံး ချွေးစေးတွေနဲ့ ကပ်စေးနေတော့ … မဝတ်ချင်တော့ပါဘူး … အရင်တုန်းကလည်း … ကျွန်မ အရမ်းအိုက်ရင် … ဝတ်လေ့မရှိပါဘူး … အောက်ခံဘော်လီလေးကို … ချွတ်လိုက်တော့ … သားကောင်းမိခင် ရင်နှစ်မွှာက … ဖွံ့ဖြိုးတင်းရင်းနေသည် … မနက်ကလေ … မောင် အရမ်းနမ်းတော့ … ကျွန်မကော့ကော့ပေးတဲ့အဖြစ်က … သိပ်ရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲ … မောင်နမ်းတာ … မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ပြီး … ကော့ပေးလိုက်တာ … မကောင်းပါဘူးရှင် … မောင် … ထိပ်ဖျားလေးကို … အတင်းလိုက်ရှာတုန်းက … ကျွန်မ ရင်တွေ လှိုက်ဖိုမောခဲ့ရတာ … မခံစားတတ်အောင်ပဲရှင် … အို … ညကျရင် … မောင်က … ကျွန်မတကိုယ်လုံး နမ်းမှာပေါ့နော် … ဟင့် … ရှက်ပါတယ်မောင်ရယ် … မှန်တာဝန်ခံရရင် … မောင်နမ်းတာကို … ရှက်ပေမယ့် … ထပ်ပြီး အနမ်းခံကြည့်ချင်ပါသေးတယ် … ရင်ထဲမှာ … လှိုက်ကနဲ … ဖိုကနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ခံစားချက်ကို … မမေ့နိုင်တော့ပါဘူးရှင် … ထမီလေးကို … ချွတ်လိုက်ပြီး … ကျွန်မ ညဝတ်ဂါဝန်လေးကို … လဲနေတုန်း … မသင်္ကာလို့ … လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ … တံခါးလေးက … ဟစိလေး ဖြစ်နေပါတယ် … အို … မောင်လေ … … ကျွန်မအင်္ကျီလဲတာကို … ချောင်းကြည့်နေတယ် … မောင် … တော်တော်လည်တယ် … ခုနက … တံခါးသေချာပိတ်သွားတာမှ မဟုတ်ပဲ … ကျွန်မလေ … မောင့်ကို … ကြောက်လာတယ် … မောင်က … ကျွန်မကို အလွတ်ပေးမှာ … မဟုတ်တာ သေချာသွားပြီ … ဟင့် … မောင်နဲ့ ကျွန်မ … ချစ်တင်းနှောကြရင်ဖြင့် … ကျွန်မလေ … ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ အေးစက်လာပါတယ် …
“ဟာကွာ … မောင် … အရမ်းဆိုးတယ် … တို့ အဝတ်လဲနေတာ … ချောင်းကြည့်ရသလား”
“မ … က အရမ်းလှတယ်နော် … မောင်အရမ်းကံကောင်းတာပေါ့နော် …”
“အို … သွားပါ …”
“ဘယ်သွားရမှာလဲ … မရဲ့ … မင်္ဂလာဦးမှာ … သတို့သားကို … အဲဒီလို မနှင်ထုတ်ရဘူးလေ …”
ကျွန်မ … မျက်နှာလေး … ရှက်သွေးဖြာသွားပါတယ် …
“မရှက်ပါနဲ့ မ … ရယ် … အခု ခေါင်းမူးနေသေးတယ် မှတ်လား … ရော့ … သံပုရာရည်လေး အရင်သောက်လိုက်နော် … မ”
“ကြည့်စမ်းပါအုံး … မ ရယ် … ချွေးတွေချည်းပဲ … ချွေးနဲ့ အအေးပတ်ကုန်တော့မှာပဲ …”
“အင်း … ခဏနေ ခြောက်သွားမှာပေါ့ … မောင်ရယ် …”
မောင် ဖျော်လာတဲ့ … သံပုရာရည် ချဉ်ချိုလေးကို … သောက်ပြီး … ကျွန်မ ခေါင်းမူးတာ နည်းနည်း သက်သာသွားသည် … အင်း … ဒီလိုတော့လည်း … မောင်က … ချစ်တတ်သားပဲ …
“မ … ခေါင်းမူးနေရင် … ခဏလှဲနေလိုက်နော် …”
လှဲနေရမယ် … မောင့်အကြံ ဒါအကုန်ပဲလားဟင် … မောင်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတုန်း … ကျွန်မက … လှဲနေရင် … မောင့်အကြိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ … ကျွန်မက … မောင့်ကို … ကြည့်လိုက်တော့ … မောင့်ပုံစံက … ရိုးရိုးသားသားပါပဲ …
“မ … စိတ်ထဲမှာ … မောင် … အတင်းဖက်နမ်းမယ်များ ထင်နေလို့လားဟင် …”
“အို … မဟုတ်ပါဘူး … မနက်ကလိုဆိုရင် … တို့ ကြောက်တယ် …”
“ဟား ဟား ဟား … မနက်တုန်းက … ပျော်လွန်းလို့ ဖက်နမ်းလိုက်တာပါဗျာ … လာလှဲနေလိုက်နော် … မောင် နှိပ်ပေးမယ် … လာ … လာ”
ကျွန်မလေ … မလှဲချင်လှဲချင်နဲ့ … မွေ့ယာပေါ်ကို … လဲကျသွားပါတယ် … မောင်က ဘေးမှာလာထိုင်ပါတယ် … ကျွန်မက ပက်လက်ကလေးပေါ့ … မောင်လေ … ကျွန်မ မျက်ခုံးလေးကို … စနှိပ်ပေးတယ် … မောင်က ရိုးရိုးသားသားနှိပ်ပေးပေမယ့် … ရင်တွေ ခုန်နေတဲ့ … ကျွန်မက … မရိုးသားတာလားဟင် … ညဝတ်ဂါဝန်အောက်က … ရင်နှစ်မွှာက … ဖားဖိုကြီးလို … မို့လိုက် ဖောင်းလိုက်နဲ့ … စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ … မောင် တွေ့မှာပါလေ …
“အို … မလုပ်ပါနဲ့ … မောင်ရယ် … ငရဲကြီးကုန်ပါ့မယ် …”
“မကြီးပါဘူးကွာ … မျက်စိလေး မှိတ်ထားနော် … သေချာနှိပ်ပေးမယ်”
လေးငါးမိနစ်လောက် … မောင် … သေချာနှိပ်ပေးပြီးနောက် …
“ဘယ်လိုလဲ … အနှိပ်ခံရတာကောင်းတယ်မှတ်လားဟင် …”
“အင်း … မောင်က တအားတော်တာပဲ …”
“မ … နည်းနည်းနာမယ်နော် … ဒီငယ်ထိပ်က ဆံပင်စုလေးကို … ဆွဲပေးမယ် …”
“အရမ်းနာအောင် … မလုပ်နဲ့ မောင်ရယ် …”
“သိပ်မနာပါဘူး … တမိနစ်ပဲ ဆွဲမှာပါ … ဒါမှ မ ခေါင်းထဲက … အပူတွေ ပျောက်သွားမှာ …”
“လုပ်ကြည့်လေ … နာရင်တော့ … အော်မှာနော် …”
မောင် … ကျွန်မ ငယ်ထိပ်နားက … ဆံပင်စုလေးကို … ဆွဲလိုက်သည် …
“အား … နာတယ် … နာတယ် … မောင် … လွှတ်ကွာ … အရမ်းနာတယ် …”
“ခဏလေး … ခဏလေး … တမိနစ်ပဲ …”
“ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … နာတယ် … မောင်ရယ် … လွှတ်ပါတော့ …”
ကျွန်မလေ … နာလွန်းလို့ … ယောင်ယမ်းပြီး … မောင့်ပေါင်ကို … ကိုင်ထားမိတယ် … မောင့်ရဲ့ပေါင်ကလေ … မာတောင့်နေတာပဲ … မောင်က … ဝိတ် သွားသွား မထားတော့ … ကြွက်သားတွေက … မာပြီးတင်းနေတာပဲရှင် … ကျွန်မ … မောင့်ပေါင်ကြီးကို … ကိုင်လိုက်တော့ … မောင်လည်း တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် …
“အခု … အပူထွက်သွားပြီမှတ်လားဟင်”
“အင်း ဟုတ်တယ်နော် … မောင်က အရမ်းတော်တာပဲ”
“တော်ရမယ်လေ … မရဲ့ မောင်ပဲဟာ … ဟဲ … ဟဲ”
“မောင် … ဖယ်တော့လေကွာ … “
“မောင်နော် … ဖယ်ပါကွာ … တို့ ကြောက်တယ် …”
“ဘာကို ကြောက်တာလဲဟင် …”
“မောင့်ကို ကြောက်တာ …”
“မောင်က … ဘာလုပ်လို့လဲဟင် …”
“အို … မောင်နော် … သိရဲ့သားနဲ့ … ဟိုလေ … ဟာကွာ … တို့ … ကြောက်နေတယ်ကွာ …”
“အင်းပါ … မရယ် … ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး … ခြေလက်မျက်နှာ သွားဆေးလိုက်နော် …”
ကျွန်မ … ရေချိုးခန်းထဲ … ဝင်ပြီး … ခြေလက်မျက်နှာဆေးရင်း … မထူးတော့ပါဘူး … တကိုယ်လုံးက … ချွေးစေးတွေနဲ့ … နံနေသလို ဖြစ်နေတော့ … ရေချိုးလိုက်တယ် … တော်ကြာ … မောင်နမ်းလို့ … အနံ့ထွက်နေရင် … အထင်သေးသွားမှာ စိုးပါတယ် … ကျွန်မရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကလေ … အရမ်းတင်းပြီး … ထိပ်ဖျားလေးတွေက … ထောင်နေပါတယ် … ဘာကြောင့်မှန်းမသိတဲ့ … ခံစားချက်တမျိုးကို … ရင်ထဲက … တောင့်တနေပါတယ် … မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေကိုလား … မောင့်ရဲ့ အထိအတွေ့တွေကိုလား … မပြောတတ်ပါဘူးရှင် … ပေါင်ကြားက ရွှေကြုပ်လေးထဲမှာလဲ … ချွဲပြစ်တဲ့ … အရည်တွေနဲ့ ကပ်စေးနေပါတယ် … သေချာ ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပြီး … အတွေးရိုင်းလေး … ဝင်လာပါတယ် … ညကျလို့ … မောင်နဲ့ ချစ်တင်းနှောရင် … မောင်က … ကျွန်မရဲ့ … ရွှေကြုပ်လေးကို … နမ်းမှာလားဟင် … မနမ်းလောက်ဘူးထင်ပါတယ် … မောင် ဘုန်းနိမ့်သွားမှာပေါ့ … ဟင့်အင်း … မနမ်းခိုင်းရက်ပါဘူး … အို … ငါဘာတွေ လျှောက်တွေးနေတာလဲမသိပါဘူး … ဒါပေမယ့် … အတွေးတွေကြောင့် … ကျွန်မ တကိုယ်လုံး … တောင့်တင်းနေပြီး … တစ်ခုခုကို တောင့်တနေတယ်ဆိုတာ … လိမ်လို့မရပါဘူးရှင် … မောင်ချစ်ချင်လည်း … ချစ်ပါစေတော့ … အပျိုစင်ပန်းဦးလေးကို … ချွေမယ်ဆိုလည်း … ချွေပါတော့ … မောင်ရယ် … တို့ … ခွင့်ပြုရမှာပေါ့ … ဟုတ်ဖူးလား … ရေချိုးပြီးနောက် … မျက်နှာသုတ်ပဝါကြီးကို … ကိုယ်လုံးလေးမှာ ပတ်ပြီး …. အပြင်ထွက်လာတော့ … မောင်စောင့်နေပါတယ် …
“အို … ဒုက်ခပါပဲ”
ကျားရှေ့ မှောက်ရက်လဲသလိုပါပဲ … မျက်နှာသုတ်ပဝါက … တောင့်တင်းကျစ်လစ်တဲ့ … ကျွန်မကိုယ်လုံးလေးကို … လုံခြုံအောင် … ဘယ်ကာထားနိုင်ပါ့မလဲရှင် … ဖွံ့ထွားတဲ့ … ရင်နှစ်မွှာက … တဝက်လောက်ပေါ်နေပြီး … ဖြူဝင်းတဲ့ရင်သားဆိုင်တွေက … မို့မောက်ကာ … တင်းတင်းလေး ရုန်းထနေသည် … မောင်လေ … ကျွန်မကို … မြင်တာနဲ့ … အတင်းဖက်နမ်းတော့တာပဲရှင် …
“အို … မောင် … မနမ်းနဲ့ကွာ …”
“အို … ဟင့် … ပြောလို့လဲ မရဘူး …”
မောင်လေ … ကျွန်မကိုယ်လေးကို … အတင်းဖက်ထားပြီး … မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို … လျှောက်နမ်းတော့တာပါပဲရှင် … ရှက်လွန်းလို့သာ … ရုန်းကန်နေတာ … ကျွန်မ ငြင်းဟန်လေးက … အားမရပါဘူး … မနက်က … မောင့်အနမ်းတွေကို … တမ်းတနေမိတော့ … မရုန်းမိပါဘူး … မောင်လေ … ကျွန်မကို … နမ်းနေရင်းနဲ့ … မွေ့ယာလေးပေါ်ကို … နှစ်ယောက်သား … လဲကျသွားပါတော့တယ် … မောင့်အနမ်းတွေက … မျက်နှာတစ်ခုလုံး လျှောက်နမ်းနေသလို … ကျွန်မရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကလည်း … မြန်လာပါတယ် …
အို … မောင်ရယ် … ကျွန်မရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို … လာနမ်းတဲ့ … မောင့်အနမ်းတွေက … ပူနွေးလွန်းပါတယ် … ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းအိအိလေးတွေကို … မောင် စုပ်ယူသွားတော့လေ … ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဗြောင်းဆန်သွားတာပဲရှင် … အို … မောင်ရယ် … မောင့်ရဲ့ လျှာလေးက … ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းကြားထဲ တိုးဝင်လာပြန်ပြီ … အို … အို … မောင်နော် … ဟင့် … ကျွန်မလျှာလေးကို … မောင် စုပ်ယူသွားလိုက်တာ … ကျွန်မ ရင်ထဲက အသဲတွေပါ … ပါသွားမတတ်ပါပဲရှင် … မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေက … ချိုမြိန်လွန်းတော့ … မျက်စိလေး စင်းပြီး … မောင့်ကို … တင်းတင်းဖက်ထားရင်း … မောင်ချစ်သမျှ ကျွန်မလိုက်လျောလိုက်ပါတယ် … ဟင်း … အနမ်းတွေက … ငါးမိနစ်လောက်ကြာတယ် ထင်တယ် … မောင်နဲ့ … ကျွန်မ … ခဏလေး နမ်းတာရပ်သွားတော့ … သက်ပြင်းလေးခိုးချမိပါတယ် … မောင်ရယ် … ချစ်ချင်သလိုသာ ချစ်ပါတော့ … မောင်ရယ် … ကျွန်မရင်ထဲမှာလေ … မောင်ချစ်သမျှကို … လိုက်လျောချင်နေတဲ့ … ဆန္ဒအပြည့်ပါပဲကွယ် …
“အရမ်းချစ်တယ် … မ ရယ် …”
“ချစ်တာပေါ့ … မောင်ရယ် … ချစ်တာပေါ့ …”
“မ … ကျွန်တော် … မ ကို … အရမ်းချစ်လို့ ရပြီလားဟင် …”
ကျွန်မလေ … မောင့်အမေးကို … မဖြေနိုင်အောင် … ရှက်ရွံ့သွားပါတယ် … မောင် တော်တော်ဆိုးတယ်ရှင် … အပျိုစင်လေးကို … ဒါမျိုးမေးစရာလားလို့ … ချစ်လွန်းလို့ … လက်ထပ်လိုက်တာပေါ့ … မောင် ပြုသမျှ … နုမယ့် … တို့ပါကွယ် … ကျွန်မလေ … ရှက်လွန်းလို့ … မောင့်မျက်နှာကို မကြည့်ရဲတော့ဘူး … ခေါင်းလေး စောင်းကာ …
မျက်စိလေးကို မှိတ်ပြီး … ဆက်ချစ်လာမယ့် … မောင့်အနမ်းတွေကို … စောင့်နေလိုက်ပါတယ် …
ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည် … ဝန်ခံခြင်းလို့ … မောင်မှတ်ယူလိုက်တယ် ထင်ပါတယ် … ခေါင်းလေးစောင်းသွားတဲ့ … ကျွန်မရဲ့ လည်တိုင်ဝင်းဝင်းလေးကို … နမ်းပါတယ် … အို … မောင်ရယ် … ဘယ်လိုများ နမ်းလိုက်တာလဲဟင် … ကျွန်မ ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထသွားပါတယ် … မောင်လေ … အနမ်းတွေက .. တဖြေးဖြေး အောက်ဆင်းလာပါတယ် … အို … မျက်နှာသုတ်ပဝါလေးက … တင်းတင်းစီးထားတော့ … ရင်နှစ်မွှာက … မို့မောက်နေပါတယ် … မောင် … ကျွန်မရဲ့ … ရင်နှစ်မွှာကြားကို … စနမ်းပါတယ် … အို … ရှင် … သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေလာတဲ့ … ကျွန်မရဲ့ … ရွှေရင်မို့မို့လေးက … မောင့်အနမ်းတွေကြောင့် … ပိုပြီး ကော့လာပါတယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်ခေါင်းကို … တွန်းဖယ်လိုက်ချင်ပေမယ့် … မတွန်းဖယ်ရက်ပါဘူး … ဆွဲအားတစ်ခုက … မောင်ဆက်နမ်းဖို့ … တွန်းအားပေးနေပါတယ် …
“မ … မောင် … ဖြည်လိုက်တော့မယ်နော် …”
“အို … ဟင့်”
မောင်ပေါ့ … ကျွန်မရဲ့ … အဖြေတောင် မစောင့်တော့ဘူး … မျက်နှာသုတ်ပဝါလေးကို … ဖြည်လိုက်ပါတယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်လက်ကလေးကို … အမြန်ဖမ်းပြီး …
“မောင်က … တို့ကို … တကယ်ချစ်တာပါနော် …”
“မေးနေစရာလိုသေးလား … မ ရယ် … ချစ်တာပေါ့ … အရမ်းချစ်တာပေါ့ …”
“တို့လည်း … မောင့်ကို … အရမ်းချစ်တယ်ကွယ် … မောင် … တို့ကို … ပစ်မသွားရဘူးနော်”
“ပစ်သွားစရာလား … မ ရယ် … ဒီလောက်ချစ်တဲ့ဟာကို …”
“အင်းပါ … မောင်ရယ် … တို့ ယုံပါတယ် …”
ကျွန်မလေ … မောင် ဆက်နမ်းဖို့ … လိုက်လျောလိုက်ပါတယ် … သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်ဦးသူ … နမ်းချင်သလိုသာ နမ်းပါစေတော့ … မောင်ပျော်ရင် … ကျွန်မပျော်တာမို့ … မောင်လိုချင်တာ … ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ် … ကျွန်မလေ … မျက်စိလေး မှိတ်ပြီး … ရင်နှစ်မွှာကို … မောင်နမ်းမယ့် အနမ်းတွေကို … ရင်ခုန်စွာနဲ့ … စောင့်နေလိုက်ပါတယ် … မျက်နှာသုတ်ပဝါလေးက … လှပ်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး … ကျွန်မရဲ့ … အလှတရားတွေ … ပေါ်လာပါတယ် … ဖြူဝင်းတဲ့ … ရင်နှစ်မွှာက … အလုံးတူ ဝိုင်းစက်နေပြီး … အလယ်မှာ … ပတ္တမြားခဲလေးက … တင်တယ်ဆိုရုံလေးတင်ထားတာပါ … ကျွန်မရဲ့ … ရင်အလှကို ကြည့်ပြီး … မောင်မနေနိုင်တော့ပါဘူးရှင် …
“လှလိုက်တာ … မ ရယ် … အရမ်းလှတယ် …”
“အို … မောင်ရယ် …”
မောင် … ကျွန်မ ရင်သားတွေကို … မက်မက်မောမောနဲ့ … ကြည့်ပြီး … အရမ်းကို သဘောတွေကျနေပါတယ်ရှင် …
“မောင်ရယ် … အဲဒီလိုမျိုးကြီး … စိုက်မကြည့်နဲ့လေကွာ … အရမ်းရှက်ပါတယ်ဆိုနေမှ … ဟင့်”
“လက်တွေ မကာနဲ့လေ … မရယ် … ဖြေးဖြေးလေး ကိုင်မယ်နော် …”
ကျွန်မ ကာထားတဲ့ … လက်လေးတွေကို … ဆွဲဖယ်လိုက်တယ် … ရှက်တာရယ် … ကြောက်တာရယ်ကြောင့် … မဖယ်ပေးရဲပါဘူး … မောင်လေ … ကျွန်မ လက်ကလေးကို နမ်းလိုက်တယ် …
“ဖယ်ပေးပါနော် … မရယ် … မောင်ကိုင်ချင်လို့ပါ …”
“အို … မောင်ရယ် …
ကျွန်မလေ … မျက်စိလေး မှိတ်ပြီး … ကျွန်မလက်ကို ဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ် … သိပ်ချစ်လွန်းတဲ့ မောင့်ကို … လိုက်လျောရမှာပေါ့ရှင် … မောင် … ကျွန်မ ရင်သားအိအိလေးကို … ဖွဖွလေး လာကိုင်ပါတယ် … ကျွန်မလေ … တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … အသဲယားလိုက်တာရှင် … မောင် … ကျွန်မရင်တွေကို … ခြေမွပစ်မှာလားဟင် …
“မောင် … ဖြေးဖြေးနော် …”
“အင်းပါ … မရယ် … မရင်သားတွေက … သစ်တော်သီးလောက်ရှိတယ်နော် …”
“အို … မောင်နော် … မပြောနဲ့ကွာ … တို့ နားရှက်တယ်”
“ဟိတ် … မောင် … ပြောလေဆိုးလေပါလား”
“မောင် … ညှစ်ချင်တယ်ကွာ …”
“ဟင့်အင်း … နော်”
မောင်လေ … ကျွန်မရင်သားတွေကို … ဖွဖွလေး နယ်ပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်မ … အသွေးအသားတွေ ဗြောင်းဆန်သွားတာပဲရှင် …
“အို … ဟင့် …”
ရင်နှစ်မွှာကို … မောင် စိတ်ကြိုက် … ကိုင်တော့လေ … ကျွန်မ … ရင်တွေ ပူလာပါတယ် … ကြက်သီးတွေက တဖြန်းဖြန်းထလို့ … တကိုယ်လုံးလည်း … ထွန့်ထွန့်လူးနေတာပဲ …
မောင်လေ … ကျွန်မ … ရင်နှစ်မွှာကို … နမ်းတော့တာပဲရှင် … မောင့်ရဲ့ မွတ်သိပ်တဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် … ကျွန်မ ရင်တွေ … အရမ်းခုန်ပြီး … ရင်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲ လှိုက်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ် … အို … မောင်ရယ် … မောင်လေ … ကျွန်မ … ရင်သားထိပ်ဖျား သေးသေးလေးကို … အတင်းစုပ်တော့ … ကျွန်မ … နှုတ်ခမ်းလေးက … မမျိုသိပ်နိုင်တော့ဘူးရှင့် …
မောင်လေ … ကျွန်မ ရင်သားတစ်ဖက်ကို နမ်းတယ် … တစ်ဖက်ကလည်း … ဆော့ကစားတယ် … သိပ်ဆိုးတယ် မောင်ရယ် … အို … ဖြေးဖြေး စို့ပါကွယ် … တို့ … မောတယ်ကွာ … မနေတတ်ဘူးကွယ် … မောင် ကျွန်မ ရင်သားကို … ဖွဖွလေး နယ်နေရင်း … ထိပ်ဖျားလေးကို … လက်မနဲ့ လက်ညှိုး … ညှပ်ပြီး .. ချေလိုက်ပါတယ် … အစေ့လေးက … သေးသေးလေးမို့ … မောင်ကိုင်ရခက်နေပါတယ် … မောင်လေ … မရမက … အတင်းညှစ်ပါတယ် …
“အ … မောင် … အရမ်းမညှစ်နဲ့ကွာ … တို့ … မနေတတ်ဘူး .. အရမ်းယားတယ်ကွာ … အို … ဟင့် …”
“ဟင့် … မောင်ကွာ … အာ … ရှီး … ဟင့် … ကျွတ် … ကျွတ် … ရှီးး … “
ကျွန်မ ဗိုက်ထဲက … ကလီစာတွေ ဗြောင်းဆန်ကုန်ပြီလား မသိပါဘူးရှင် … အတင်း နမ်းနေတဲ့ … မောင့်ခေါင်းကို … တွန်းဖယ်ရမယ့်အစား … ကျွန်မလက်တွေက … မောင့်ဆံပင်တွေကြားထဲ … ထိုးထည့်ပြီး … အတင်းဖိပေးနေပါတယ် … အောက်က ရင်နှစ်မွှာကလည်း … ကော့ကော့ပေးနေပါတယ် … ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲဟင် … ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ထိန်းချုပ်လို့မရတော့အောင် … မောင့်ကို ချစ်မိသွားတာလား မသိတော့ပါဘူးရှင် …
“မောင် … ရယ် … တော်ပါတော့နော် … တို့ ရင်တွေ အရမ်းမောနေပြီ …”
မောင်လေ … ကျွန်မကို … စကားတောင် ပြန်မထူးတော့ဘူး … အဆော့မက်တဲ့ကလေးလိုပဲ … အရုပ်သစ်လေးရတော့ … ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ဖြစ်နေပြီ … နူးအိတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ရင်နှစ်မွှာက … မောင့်အနမ်းတွေ … မောင့်အဆုပ်အညှစ်လေးတွေ … မောင့်ဝင်သက်ထွက်သက်လေကြောင့် … အရမ်းကို … တင်းပြီး … ကြွတက်မို့မောက်နေပါတယ် …
မောင်လေ … ကျွန်မ ရင်သားတွေကို … နမ်းနေရင်းက … အနမ်းတွေက … အောက်ကို ရွေ့လာပါတယ် … ကျွန်မဗိုက်လေးကို နမ်းတယ် … ချက်ကလေးနားရောက်တော့ … လျှာလေးနဲ့ ကလိပါတယ် …
“အို … မောင့် … “
မောင့်အနမ်းတွေက … ကျွန်မ ဗိုက်လေးကို … လှိုင်းထစေပါတယ် … ချက်နားကလေ … အောက်ကိုရွေ့တော့လေ … ကျွန်မ … ရှက်လိုက်တာရှင် … မောင့်ကိုလေ … ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ပြောပြော … အပျိုစင်လေးမို့ … အရမ်းရှက်မိပါတယ် မောင်ရယ် … တသက်လုံး … လုံလုံခြုံခြုံ ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ … ကျွန်မရဲ့ ရတနာရွှေကြုပ်လေးက … ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှာ … ဖောင်းကားနေပါတယ် … အို … ဟင့် … မောင် … ကျွန်မ ပန်းလေးကို … ကြည့်နေတာပေါ့လေ … ကျွန်မ ပေါင်လေး နှစ်ဖက်ကို … လိမ်ကျစ်ပြီး … နောက်ဆုံး ခံတပ်ကို … ကာကွယ်နေပါတယ် … မောင်လေ … ကျွန်မပေါင်လေးကို … ဖြဲကြည့်တယ် … မရဘူး … မောင်ရယ် … တို့ … အရမ်းရှက်တယ် … အရမ်းကြောက်တယ်ကွာ … မောင်လေ … ဆီးခုံမို့မို့လေးပေါ်က … အမွှေးလေးတွေကို … မြင်သွားပြီပေါ့ … မောင် … အမွှေးလေးတွေကို … နမ်းလိုက်ပါတယ် … မြတ်မြတ်နိုးနိုးပေါ့ရှင် … မောင်က … စိတ်ရှည်ပါတယ် … ကျွန်မ ကြောက်နေတာသိနေတော့ … ပေါင်လေးကို … နမ်းတယ် … ခြေသလုံးလေးကို … နမ်းတယ် … ခြေဖမိုးလေးကို နမ်းတယ် …
“မောင် … နော် … ခြေထောက်တွေ လျှောက်မနမ်းနဲ့ကွာ … မောင် ဘုန်းနိမ့်လိမ့်မယ် … ဟိတ် … အာ”
“မောင် … ရယ် …”
မောင်ရယ်လို့ပဲ … ကျွန်မ ပြောနိုင်ပါတော့တယ် … ကျွန်မ ခြေမလေးကို … မောင်ပေါ့ … သူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး … စုပ်နေပါတယ် … ကျွန်မလေ … ကျွန်မ … မောင့်ကို … အရမ်းချစ်သွားတယ် … မောင့်ရဲ့ အပြုအစုတွေကြောင့် … ကျွန်မ ကြွေသွားပြီကွယ် … ကဲ … မောင်ရယ် … မောင် ဆွတ်ခူးချင်တဲ့ … တို့ရဲ့ အပျိုစင်ပန်းလေးကို … ယူပါတော့ … ကျွန်မလေ … လိမ်ကျစ်နေတဲ့ … ပေါင်လေး နှစ်ချောင်းကို … ဖြေပေးလိုက်တယ် … ဆွတ်ခူးလိုက်ပါ … မောင်ရယ် … ဆွတ်ခူးလိုက်ပါ … ကျွန်မ ပေါင်နှစ်ချောင်း … အားလျော့သွားတာ … မောင်သိတယ် … လူပါးလေး မောင်က … အနမ်းတွေ ပေးရင်း အပေါ်ပြန်တက်လာတယ် … ကျွန်မလေ … အသဲယားလွန်းလို့ … မျက်စိလေး မှိတ်ထားလိုက်ပါတယ် … မောင်လေ … ပေါင်ကြားထဲ … မျက်နှာ … ဘယ်လို ရောက်သွားလဲ မသိပါဘူး … ကျွန်မက … ဟပေးလိုက်တာလား … မောင်က … ဖြဲပြီး ဝင်လာတား …
“လှလိုက်တာ မ … ရယ် … အရမ်းလှတာပဲ …”
“အို … မောင်နော် …”
ကျွန်မ … ရွှေကြုပ်လေးကို … မောင် … တို့ကြည့်တယ် … ထိကြည့်တယ် … အမွှေးနုနုလေးတွေ … သဘောကျလွန်းလို့ … နမ်းတယ် … ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ … ကျွန်မ ပန်းလေးကို … နမ်းတယ် … အရမ်းရှက်ပေမယ့် … မောင့်ကို မတားနိုင်တော့ပါဘူး … မောင့်ကို တားမယ့် … နှုတ်ခမ်းလေးက … အားစေးထည့်သလို … နှုတ်ပိတ်နေပါတယ် … မောင်လုပ်ချင်တာသာ လုပ်ပါတော့ … မောင်ရယ် … မောင်လေ … ကျွန်မ … အတွင်းခံလေးကို … ဘေးကပ်လိုက်တယ် … ပန်းလေးပေါ်က … အတွင်းခံလေးက … ဘေးကပ်သွားပြီး … ကျွန်မ ပန်းလေးကို … ဖြဲကြည့်တယ် … ရှက်လိုက်တာ မောင်ရယ် … ရှက်လိုက်တာ … ကျွန်မလေ … ကျွန်မ … မျက်စိကို မှိတ်ပြီး … ခေါင်းအုံး အဖျားလေးကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် … ဆွဲထားရင်း … အရှက်ဖြေနေရတယ် …
“မ … အဖုတ်လေးက … အရမ်းလှတယ်ကွာ …”
“အို … မောင်နော် ဟင့် … မကြည့်နဲ့တော့ကွာ … အရမ်းရှက်လာပြီ …”
“သုံးရောင်ခြယ်လေးနော် … မောင်နမ်းချင်တယ်ကွာ …”
ရှက်လိုက်တာမောင်ရယ် … ဘာသုံးရောင်ခြယ်လဲ … မသိပါဘူး … ကျွန်မ ဒီအရွယ်ထိ … ကိုယ့်ဟာကိုယ် သေချာမကြည့်ဖူးတော့ … မောင် ဘာပြောမှန်းနားမလည်ပါဘူး …
“အာ … ဟေ့အေး … နမ်းရဘူးနော် … မောင် …”
“ဟာ …. အား … အား … အား … “
မောင်လေ … ကျွန်မရဲ့ … ပန်းလေး အဝကို နမ်းလိုက်ပါတယ် … မရွံဘူးလား မောင်ရယ် … မောင့်ကိုလေ … မတားဆီးနိုင်တော့ဘူး … အထိအတွေ့က … အရမ်းခံရတယ် မောင်ရယ် … မောင့်ရဲ့ လျှာဖျားလေးနဲ့ … ကျွန်မ … ပန်းလေးနုနုကို … ထိလိုက်တာ … အရမ်းကောင်းတာပဲရှင် … ရင်ထဲမှာ … ဗုံးပေါက်သလိုပဲ … ဝုန်းကနဲ … သွေးတွေ ဆူကြွလာပါတယ် … အို … မောင်ရယ် … ဟင့် …
“အား … အား … အား … ရှီး … “
ကျွန်မ ရူးပြီ … မောင်ရယ် … အသွေးအသားတွေက … ပွက်ပွက်ဆူလောက်အောင် … မောင်နမ်းတတ်တယ်ကွယ် … မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေအောက်မှာ … ကျွန်မလေ … ဘယ်လိုနေရမလဲမသိတော့ပါဘူးရှင် … ကောင်းလွန်းတော့ ခံရခက်တယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ … မောင် … ရင်သားလေးတွေကို နမ်းတုန်းကနဲ့ … ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးရှင် … အထိအတွေ့က … ကျွန်မကိုလေ … ဟိုးမိုးကောင်းကင်ဆီ … ခေါ်သွားပါတယ် … အေးကနဲ သိမ့်ကနဲ … မြင့်လိုက် နိမ့်လိုက်နဲ့ … ရင်တုန်လွန်းလို့ … ကျွန်မ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … အတင်းဖိကိုက်ထားပြီး … မောင့်အနမ်းတွေကို … ခံနေရရှာတယ် … နမ်းပါမောင်ရယ် … နမ်းပါ … သိပ်ချစ်ရလွန်းတဲ့ … ချစ်ဦးသူ မောင့်ကို … အရာရာပေးဆပ်ထားပါတယ် … မောင်လိုချင်တာ ယူပါလေ … မောင်လေ … ကျွန်မ ပန်းလေးထဲက … ပန်းနုရောင် ပန်းဖတ်လေး နှစ်ဖတ်ကို … လျှာနဲ့ယက်လိုက်တယ် … အာ … ဟာ … ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် … ကောင်းလိုက်တာ … နူးညံ့တဲ့ ပန်းဖတ်လေးတွေကို … မောင့်လျှာကြမ်းကြမ်းနဲ့ … ယက်ပေးတော့ … ကျွန်မလေ … ကျွန်မ … ရမက်တွေ ထန်ကုန်တာပေါ့ … ဟိုးအရင်တုန်းက … အပျိုလေးဆိုတော့ … ကာမအရသာဆိုတာ ဘယ်သိပါ့မလဲရှင် … မောင်နဲ့ လက်ထပ်မှ … မောင့်အနမ်းတွေအောက်မှာ … ဒီအရသာကို … စသိလာပါတယ် … ကာမဆန္ဒက … ပြောမပြတတ်အောင် … ထကြွနေလို့ … ကျွန်မလေ … မရှက်နိုင်တော့ပါဘူး … အတင်းပဲ … ပန်းလေးကို ကော့ကော့ပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်မတင်လေးတွေ … မွေ့ယာကနေ လွတ်သွားလောက်အောင် … ကော့ပစ်လိုက်တာ … မောင် နမ်းတာ အရမ်းကောင်းလို့ရှင့် … ရှက်ပေမယ့် မနေနိုင်တော့ … မောင်ရယ် … ပန်းလေးထဲက … ယားလိုက်တာမှ … အရမ်းပဲ … အထဲကနေ … မောင့်လျှာလေးများ … တိုးဝင်လာမလား … အတင်း ဖမ်းပြီး စုပ်နေတာ … ရှက်လိုက်တာကွယ် … မောင်ရယ် …
“အို … အား … အား …”
နမ်းတတ်လိုက်တာ မောင်ရယ် … နမ်းတတ်လိုက်တာ … ကျွန်မရဲ့ … ငြီးသံတွေက … ထိန်းမရအောင် … ထွက်နေပါတယ် … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … အတင်းဖိကြိတ်ထားပြီး … မောင်ပေးတဲ့ချစ်အရသာက … ကောင်းလွန်းတော့ … ဖင်လေးကို … ကော့လိုက် … စကောဝိုင်းလို … ဝေ့ကနဲ … ကော့လိုက်နဲ့ … မောင့်အနမ်းအောက်က … လွတ်လေမလား … ရုန်းကြည့်မိပါတယ် … မောင်ကလည်း မောင်ပဲလေ … ကျွန်မ အပေါ်ကို ကော့ပေးရင် … မောင့်လျှာလေးက … အပေါ်ကို လိုက်လာပါတယ် … အောက်ကိုကျသွားရင် … အောက်ကို လိုက်လာတယ် … ဘယ်ကိုဝိုက်ရင်လည်း … ပါလာတာပဲ … ကော်နဲ့များ ကပ်ထားသလား မောင်ရယ် … ခွာမရတော့ဘူး …
“အို … ဟင့် … ဟင့် … အရမ်းထိတယ် မောင်ရယ် … တို့ မခံနိုင်ဘူး … အား ရှီး … အား … အား … ရှီး”
မောင်လေ … ကျွန်မ ရတာဖူးလေးကို ဘယ်လိုများတွေ့သွားလဲမသိပါဘူး … အစေ့သေးသေးလေးကို … အတင်းပဲ ဖိပြီးယက်တယ် …
“ဟင့်အင်းကွယ် … အို … ရှီး … မခံနိုင်တော့ဘူး … မခံနိုင်တော့ဘူး … တော်ပါတော့ မောင်ရယ် … အိုး … ဟာ … ဟာ”
ကျွန်မ ခံရခက်မှန်းသိလေ … မောင်ပိုနမ်းလေပဲ … တားလို့လည်း မရတော့ဘူးလေ …
“အို … မောင် … တော် … တော်ပြီနော် … တို့ … သေးထွက်တော့မယ် …”
“ဟိတ် …. ဖယ်ပါကွာ … ဟင့် … ဟင့် …”
ကျွန်မ ပန်းလေးထဲကလေ … ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တော့ … ယားလွန်းလို့ သေးထွက်ချင်သလို … ဖြစ်လာပါတယ် … မောင်ရယ် … ဖယ်လိုက်ပါကွာ … တော်ကြာ … ရှူးရှူးတွေ ထွက်ကျကုန်မှ … မောင့်မျက်နှာတွေ ပေကုန်အုံးမယ် …
“မောင်ရေ … အား … အား … အား … မရတော့ဘူး … တို့ … မထိန်းနိုင်တော့ဘူး … ရှူရှူးတွေ … ထွက်ကုန်ပြီ … ထွက်ကုန်ပြီ … ဟင့် … ဟင့် … ဟင့် “
ကျွန်မစိတ်တွေ … ထိန်းမရအောင် … ဟိုးအဝေးကြီးကို ပျံတက်သွားပါတယ် … ထိပ်ဆုံးလည်းရောက်ရော … ဝုန်းကနဲ … ပြုတ်ကျလာတာ … ရင်ထဲ အေးကနဲ … ဖြစ်သွားတာပဲရှင် … ကောင်းလိုက်တာ … သွေးကြောလေးတွေက … တဆစ်ဆစ်ယားနေတဲ့ … ဝေဒနာလေး … တစိမ့်စိမ့်နဲ့ … ပျောက်သွားတာ … သိပ်ကောင်းတာပဲမောင်ရယ် … မောင် ပေးတဲ့ ချစ်အရသာက … တော်တော်ကောင်းတာပဲရှင် … သိပ်ချစ်သွားပြီ … မောင်ရယ် … သိပ်ချစ်သွားပြီ …
“ဟင့် … မောင် အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ …”
“သိဘူးကွာ … ရင်ထဲမှာ … အရမ်းမောနေတာပဲ သိတယ် …”
ဟုတ်ပါတယ်ရှင် … မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် … ကျွန်မ … ရင်တွေ တလှပ်လှပ်ဖြစ်နေပြီး … တကိုယ်လုံး ရှိသမျှအားတွေကို … မောင် စုပ်ယူသွားပါတယ် … သိပ်ဆိုးတာပဲ မောင်ရယ် … မောင်လေ … ကျွန်မ ပန်းလေးထဲက … အရည်တွေကို … အတင်းပဲ စုပ်ယူပြီး … မျိုချလိုက်တယ် … မောင့်လျှာကြီးနဲ့ … အတင်းပိတ်ထားပြီး … အရည်တွေကို … အကုန်ယက်ပစ်လိုက်ပါတယ် …
“မောင်ရယ် … မရွံဘူးလားဟင် …”
“မောင် … သိပ်ချစ်တာ ယုံပြီလား … မ ကို ချစ်လွန်းလို့ … မ အရည်တွေကို … မရွံပါဘူး … ချိုတောင် ချိုသေးတယ် …”
“ဟင့် … မောင်ရယ် … အရမ်းအားနာတာပဲ … ဘာလို့ အကုန်စုပ်ပစ်လိုက်တာလဲ … မောင် အကုန်စုပ်ပစ်လိုက်တာ … အားတောင်မရှိတော့ဘူး … မောင်ရယ် … တို့ကို … ဖက်ထားပါလားဟင် …”
“မောင့်ကို ချစ်တယ်မှတ်လားဟင် …”
“သိပ်ချစ်တာပေါ့ … မောင်ရယ် … သိပ်ချစ်တာပေါ့ …”
“မောင့်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် … မောင် အရမ်းချစ်ချင်လာပြီကွာ … ဟိုဟာလေးကို ချွတ်လိုက်တော့နော် …”
“ခဏလေးပါ မောင်ရယ် … တို့ အားမရှိလို့ … ခဏလေး … မှေးနေတယ် …”
မောင် … ကျွန်မ နှဖူးလေးကို … နမ်းလိုက်ပြီး … အတွင်းခံလေးကို … ချွတ်လိုက်သည် …
“အို … မောင်နော် … ဟင့်”
ကျွန်မလေ … ရှက်လွန်းလို့ … အတွင်းခံလေးကို … လိုက်ဆွဲနေမိပါတယ်ရှင် … ရှက်လိုက်တာ အရမ်းပေါ့ … အပျိုလေးဆိုတော့ … မရဲဘူးရှင့် … မောင်ကို့ သိပ်ချစ်ပေမယ့် … တကယ်တမ်း … လိုက်လျောဖို့ကျတော့ … နှမြောနေမိသည် … ကျွန်မရဲ့ … အပျိုစင်ပန်းဦးလေးကို … မောင့်ကို … ခူးခွင့်ပေးလိုက်ပေမယ့် … ရှက်လိုက်တာရှင် … မောင်လေ … အားမရှိတဲ့ … တို့ကို … အနိုင်ကျင့်တယ် … အတွင်းခံလေးက … ပေါင်လေးတစ်လျှောက် … လိပ်ပြီး … ကျွတ်သွားတယ် …
“အရမ်း … ချစ်တယ် … မရယ် … အရမ်းချစ်တယ် …”
မောင်လေ … ကျွန်မ မျက်နှာကို … အတင်းနမ်းတော့တာပဲရှင် … လည်တိုင်လေးကို … နမ်းတော့ … ယားလွန်းလို့ … အောက်က … ဟောင်းလောင်း ဖြစ်နေတာ … မေ့သွားတယ် …
မောင်လေ … သူ့အင်္ကျီတွေလည်း ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … မောင် ဘောင်းဘီကိုချွတ်တော့ … ကျွန်မ … မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်တယ် … မောင့်ရဲ့ ဟိုဟာကို … မကြည့်ရဲဘူးရှင့် … ရှက်လိုက်တာရှင် … ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ခါမှ … မနေဖူးပေမယ့် … ဖိုမကိစ္စတွေကိုတော့ … ကျွန်မ … သိတန်သလောက် သိထားပါတယ် … မောင့်ရဲ့ … ပေါင်ကြားထဲက ပစ္စည်းနဲ့ … ကျွန်မ ပန်းလေးထဲကို … ထည့်လိုက်ရင် … အို ဆန့်ပါ့မလားရှင် … တော်ကြာ မဆန့်လို့ … ကွဲပြဲသွားမှရှင့် … မသိတော့ပါဘူးရှင် … မောင်ချစ်သမျှ … လိုက်လျောလိုက်တော့မယ် … ဟင့် …
“အို အို …”
မောင်လေ … ကျွန်မပေါင်ကို ကားလိုက်ပါတယ် … ရှက်လိုက်တာ … မောင်ရယ် … ပေါင်လေးကို … အတင်း ပြန်စိတယ် … မောင်က ပြန်ကားတယ် … ကျွန်မက ပြန်စိတယ် … ဒီလိုကားလိုက် … စိလိုက်နဲ့ … ကျွန်မရင်တွေ တုန်လိုက်တာရှင် … နောက်ဆုံးတော့ … မောင့်ကို အရှုံးပေးလိုက်ပါတယ် … မောင်လေ … ကျွန်မကို … ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေက … အရမ်းကို … ရမက်ထန်နေပါတယ် … သားကောင်ကို စားခါနီးကြည့်တဲ့ … ကျားတစ်ကောင်ရဲ့ အကြည့်မျိုးဆို … ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်မျက်လုံးတွေကို … ကြည့်ပြီး … ကြောက်လာပါတယ် … သူကတော့ … ပျော်နေမှာပေါ့ … ကျွန်မကတော့ ကြောက်နေပါတယ် … မောင် သူ့အင်္ကျီတွေကို … ချွတ်လိုက်ပါတယ် … မောင့်ရဲ့ ဗလတောင့်တောင့် ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးက … ကျွန်မကို လှန့်နေတာလားဟင် … မောင့်ရဲ့ဗိုက်မှာ … ဗယ်လီတုံးလေးတွေက အစီအရီ … ဟင့် … ကြောက်လာပြီမောင်ရယ် … ကျွန်မလေ … ဆက်မကြည့်ရဲတော့ဘူး … မောင် ဘောင်းဘီဇစ်ကို ကိုင်လိုက်တော့ … မျက်စိလေးမှိတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဒါပေမယ့် … နားထဲမှာ ကြားလိုက်တာက … ဇစ်ဖြုတ်တဲ့အသံလေး … ဇွိကနဲ ကြားလိုက်ရတာ … ရင်တုန်သွားတယ် … ဟင့် ဟင့် … ကျွန်မရဲ့ အပျိုစင်ဘဝလေး … အဆုံးသတ်မယ့်အချိန်ကို နီးလာပြီပေါ့ …
“မ … ကြောက်နေတာလားဟင် “
ကျွန်မလေ … ဘာအသံမထွက်ရဲဘူး …
“မကြောက်နဲ့နော် … မ … မနာပါဘူး မရယ် …”
“ဟင့် … ဟာ …. ဟာ … ရှီး”
အိုး … မောင်လေ … သူ့ပစ္စည်းကြီးနဲ့ … ကျွန်မပန်းလေးကို လာထိတယ် … ကျွန်မ တကိုယ်လုံး တုန်သွားတာပဲရှင် … မောင့်ရဲ့ ထိပ်ဖျားက … နူးညံ့ပါတယ် … ဒါပေမယ့် မာတယ် … မောင်လေ … အရမ်းနူးညံ့တဲ့ ပန်းလေးအဝကို တေ့လိုက်ပါတယ် …
အထိအတွေ့က မပြောပြတတ်အောင်ပဲရှင် … ကျွန်မလေ … ရှက်လည်းရှက် … ကြောက်လည်း ကြောက်တော့ … ကျွန်မပန်းလေးကို … အတင်းညှစ်ထားလိုက်ပါတယ် … မောင်လေ … တေ့သာတေ့ထားတယ် … သွင်းမရဘူးရှင့် … မောင် … က စိတ်ကြီးတယ် ထင်တယ် … အတင်းပဲ … ဟိုထိုး … ဒီထိုးလုပ်တယ် …
“အို … မောင်နော် … ဟင့်အင်းကွာ … ဟင့်အင်း …”
“အို … မောင် … မောင့် …”
မောင်လေ … ကျွန်မပန်းလေးကို … ထိုးလို့လည်းမရတော့ … အပေါ်အောက် … လျှောက်ပွတ်တယ်ရှင့် … ခံရခက်လိုက်တာရှင် … အို … ဟင့် … ကျွန်မ ပန်းဖူးလေးကို … မောင့်ပစ္စည်းကြီးနဲ့ … လာလာထိတယ် … အား … ခံရခက်လိုက်တာရှင် … ပန်းလေးက အထည့်သာမခံတာ … အထဲမှာ … အတင်းညှစ်ညှစ်နေပြီး … ပန်းဝတ်ရည်တွေက … တစိမ့်စိမ့် ယိုကျနေပါတယ် … ပန်းလေးထဲကလည်း … အရမ်းယားလာပါတယ် … ချစ်ချင်လည်း … ချစ်လိုက်ပါတော့ မောင်ရယ် … ကျွန်မလေ … ပေါင်လေးကို … ပိုပြီး ကားပေးလိုက်တယ် … မောင်လေ … နည်းနည်းလေး ဟပေးတာနဲ့ … အတင်းပဲ … ထိုးထည့်တယ် …
“အား … နာတယ် … မောင်ရယ် … နာတယ်…”
ပြွတ်ကနဲ … မောင့်ထိပ်ဖျားလေး … ဝင်လာပါတယ် … ကြီးလိုက်တာရှင် … ပန်းလေးက ကျဉ်းတော့ … နာတယ်ရှင့် …
“ဟား … မရယ် … ဝင်သွားပြီ … ဝင်သွားပြီ”
မောင်ရဲ့ … နှစ်ထောင်းအားရသံက … နှစ်ကိုယ်ကြားပြောတာဆိုတော့ … ကျွန်မကို … ပိုပြီး ရမက်ထန်စေပါတယ် …
“အား … မောင် … မောင် … ပြန်ထုတ်ကွာ … ထပ်မထည့်နဲ့တော့ … ဟင့် … နာတယ် … နာတယ် … ဟီး”
မောင်လေ … ကျွန်မကို … မညှာတော့ဘူး … သူ့ဟာက … တထစ်ချင်း ဝင်ချလာတာ … အရမ်းကျဉ်းတဲ့ … ပန်းလေးထဲက အသားစိုင်တွေကို … ထိုးခွဲပြီး … ဝင်လာပါတယ် … ကြပ်လိုက်တာရှင် … ကြပ်လိုက်တာ … နာလိုက်တာလည်း … အရမ်းပဲ … အသားနုလေးတွေကို … ပွတ်တိုက်သွားတဲ့ … မောင့်ရဲ့ ဟာက … သံချောင်းလောက်ကို မာလိုက်တာရှင် …
“အား … တော်ပါတော့ … မောင်ရယ် … တို့မခံနိုင်ဘူး … ဟင့် … အရမ်းနာတယ်ကွာ …”
“ခဏလေးပါ … မရယ် … ခဏလေးပါ … “
ကျွန်မလေ … ဇောချွေးလေးတွေ ပြန်လာပါတယ် … နာလွန်းတော့ အောက်ကနေ … လူးလှိမ့်နေတာပဲရှင် … မောင် ကျွန်မ … ရင်သားတွေကို … လာနမ်းတယ် … လည်တိုင်လေးတွေကို … နမ်းတယ် … လက်လေးက … ရင်သားတွေကို … နယ်ပေးတယ် … အို … ဟင့် … အောက်ကလည်း နာ … အပေါ်ကလည်း ယား … ကျွန်မ တကိုယ်လုံး … မောင့်ရင်ခွင်အောက်မှာ … လူးလိမ့်နေတာပဲရှင် … မောင်လေ … ကျွန်မ ရင်သားထိပ်ဖျားလေးကို … ညှစ်ပြီး ချေပေးပါတယ် … အို … ကောင်းလိုက်တာရှင် … နာကျင်တာတွေ မေ့ပျောက်သွားအောင် … မောင်လုပ်တတ်တယ်နော် … စောက်ခေါင်းလေးထဲ နစ်ဝင်နေတဲ့ … မောင့်ဟာကြီးကိုတောင်မေ့သွားတယ် … မောင်လေ … သူ့ဟာကို … အထဲမှာ မွှေနေတယ် … ထက်အောက် ဘယ်ညာ … ဖမ်းမရ … ညှစ်မရအောင် … မွှေ့ယမ်းနေတော့ … ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ထူပူသွားတာပဲရှင် … ရင်ထဲမှာလည်း … လှိုက်ကနဲ ဖိုကနဲ … အို … မောင်ရယ် … ချစ်တယ် မောင်ရယ် … ချစ်တယ် …
မောင်လေ … သူ့ခါးကို ဆတ်ကနဲ ဖိချပစ်လိုက်တော့ … မောင့်ဒုတ်က … ပန်းလေးထဲ … အတင်းဝင်ချလာပါတယ် … မောင်လေ … ကျွန်မ ပန်းလေးထဲက … တစ်ခုခုကို … ထိုးခွဲပစ်လိုက်တယ် … ဆစ်ကနဲ … နာကျင်မှုက … အသည်းခိုက်အောင် … နာလိုက်တာရှင် …
“အား … နာတယ် … နာတယ် … ဟင့် … ဟီး … မောင် အရမ်းရက်စက်တယ်”
“အရမ်းနာသွားလား မရယ် … မငိုနဲ့နော် … တိတ် တိတ် … မ အပျိုမြှေးလေး ပေါက်သွားပြီ”
“အို … ဟင့် … ဟီး …”
ကျွန်မ … အပျိုမြှေးလေး ပေါက်သွားပြီတဲ့ … ဟင့် … နာလိုက်တာရှင် … ဒါဆို … ကျွန်မ … အပျိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ … မောင်လေ … ကျွန်မ အပျိုပန်းလေးကို … ဆွတ်ခူးသွားပြီ … နာလွန်းလို့ … ရုန်းကန်ပစ်နေတဲ့ ကျွန်မကို … အနမ်းတွေ တရစပ် ပေးတော့တာပဲ … ကျွန်မလေ … ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ … မျက်ရည်လေးတွေ စီးကျလာပါတယ် …
“မငိုပါနဲ့ … မ ရယ် … မောင်က ချစ်လွန်းလို့ပါ”
“ဟင့် ဟင့် …”
ငိုနေတဲ့ ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းရင်း … မောင်လေ … အဆုံးထိထိုးထည့်ထားတဲ့ … မောင့်ဒုတ်ကို … ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ် …
“ဟင့် … ဟင့် … ရှီး”
ကျွန်မလေ … မျက်စိမှိတ်ထားရာကနေ … အတင်းပဲ ထကြည့်ပါတယ် … မောင် မကောင်းဘူး … ရက်စက်တယ် … ကျွန်မပန်းလေးထဲက … ဆွဲထုတ်လာတဲ့ မောင့်ဒုတ် … နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး … ကျွန်မ လက်ကောက်ဝတ်နီးပါးလောက်ရှိတာကြီးကို … မောင် ထည့်ရက်တယ် … ဟင့် … ဒီလောက်ကြပ်နေတဲ့ … ပန်းလေးထဲ ထည့်တော့ … အထဲမှာ ကွဲပြဲကုန်ပြီလား မသိပါဘူး … ဟင် … မောင့်ဒုတ်မှာ … သွေးတွေနဲ့ …
“အို … သွေးတွေနဲ့ … မောင် “
“အပျိုမြှေးပေါက်သွားတာ … မ ရဲ့ … စိတ်မပူပါနဲ့ … အစမို့ နည်းနည်းလေး နာတာပါ …”
“သွားပါ … မောင် အရမ်းရက်စက်တယ် … ဒီမှာ သွေးတွေ ထွက်နေပြီ …”
ပန်းလေးထဲက … အရည်တွေနဲ့ အတူတူ သွေးတွေ ထွက်လာပါတယ် …
“လာပါ … မ ရယ် … စိတ်မဆိုးရဘူးနော် … ဆက်ချစ်ချင်တယ် မရယ် … လာပါ …”
“အို … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း …”
မောင် အရမ်းဆိုးတယ် … ကျွန်မကိုလေ … အတင်း တွန်းချပြီး … ပန်းလေးထဲကို … မောင့်ဒုတ်ကြီးနဲ့ … တေ့ပြီး … ဆောင့်ချပစ်လိုက်ပါတယ် …
“အား … နာတယ် … နာတယ် … ဟင့်”
မောင်က … အတင်းပဲ … ကျွန်မကို မညှာဘူး … စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်နေတဲ့ … ပန်းလေးက … ဒေါသတကြီး … မောင့်ဒုတ်ကို … ညှစ်ပစ်လိုက်တယ် … ကဲ … မှတ်ပြီလား … မောင်ရေ …
“ဟာ … ဟာ … အရမ်းညှစ်တယ် … မရယ် … အရမ်းညှစ်ထားတယ် …”
ဒီတစ်ခါ … အော်ရတာက … မောင်လေ … ကောင်းတယ် မှတ်ပြီလား … သူများကို … မညှာမတာ … သွေးထွက်အောင်လုပ်တဲ့ မောင် … ကျွန်မလည်း … အရမ်းနာတာပဲ … နာတာပျောက်သွားအောင် … အတင်းညှစ်ထားတော့ … မောင် လုပ်မရတော့ဘူးပေါ့ … မောင်လေ … ကျွန်မ ဒီလို ညှစ်နေတာကို … အရမ်းဖီးတွေ့နေတယ်ထင်ပါရဲ့ … အတင်းပဲ … ဆွဲထုတ်တယ် … ကျွန်မက အတင်းညှစ်ထားတယ် … ဟင့် … ဟင့် … ပန်းလေးထဲက … မောင့်ဒုတ်ကြီးက … ပြန်ထွက်သွားပြီ … ရင်ထဲမှာ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … ချက်ခြင်းပဲ … မောင် ပြန်ထည့်တယ် … ဟာ … အား အား … ဆီးခုံနှစ်ခု … ဂဟေဆက်သွားတဲ့အထိ … မောင်ထိုးထည့်တယ် … မောင့်ဒုတ်က ရှည်လိုက်တာရှင် … ကျွန်မ သားအိမ်ကို … ဒိန်းကနဲ လာဆောင့်တဲ့အထိ … ထည့်ပစ်လိုက်တော့ … မျက်လုံးတွေ ပြာသွားတာပဲ … ဒီလိုနဲ့ … အဝင်အထွက်တွေက … တဖြေးဖြေး မြန်လာပါတယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … အပျိုမြှေးပေါက်သွားတဲ့ နာကျင်ခံစားမှုတွေ … ပျောက်သွားပြီး … ကျွန်မစိတ်တွေ … ချစ်ရမက်ခိုး ဝေနေပါတယ် … မောင့်ဒုတ် ဝင်လာရင် … ခါးလေးကို ယမ်းခါလိုက် … ပြန်ထွက်ခါနီး … ညှစ်ထားလိုက်နဲ့ … ဖီလင်တွေ တက်လာပါတယ် … အော် … ဒါကြောင့်လည်း … အိမ်ထောင်ပြုကြတာကိုး … ဒီအရသာက … ဘာနဲ့မှကိုမတူတာပဲရှင် … မောင်လေ … ကျွန်မ ဂျိုင်းနှစ်ဖက်အောက်ကို … လက်ထည့်လိုက်ပါတယ် … လျှိုပြီး … ပခုံးနှစ်ဖက်ကို … အတင်းဆုပ်ပြီး … ဖိဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် …
“ဗြစ် … ဗြစ် … စွတ် … စွိ … အင့် … အီး … ဟင့် … ဟင့် … အား … အား “
အရမ်းပဲရှင် … နားထင်တွေ ပူထူသွားအောင် … ဆက်တိုက် … ဆောင့်ပစ်နေတယ် … မောင်လေ … အတင်းပဲ ဆောင့်တော့ … ကျွန်မ ရုန်းမရတော့ဘူး … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်းလိုက်တာ … ငြီးသံလေးက … အခန်းထဲမှာ ကျယ်လာတော့ … အတင်း နှုတ်ခမ်းကို … ကိုက်လိုက်ပြီး … အောက်က … တင်သားကို … ကော့ပစ်လိုက်တယ် … ဆောင့်ပေတော့ … မောင်ရေ … ဆောင့် … မောင်ချစ်သမျှ … တို့ လိုက်လျောမယ် … မောင်ချစ်လို့ အသက်ထွက်ရင်လည်း ထွက်ပါစေတော့ … မတတ်နိုင်တော့ဘူး … မောင့် ဆောင့်ချက်တွေက … မှန်မှန်နဲ့ အားပါတော့ … နည်းနည်းတော့ အောင့်တယ်ရှင့် …
မောင့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းတွေကြောင့် … မွေ့ယာထူထူပေါ်က … ပြန်ကန်ထွက်လာတဲ့ ကျွန်မတင်သားတွေကို … မွေ့ယာထဲ တင်ပါးကြီး မြုပ်သွားအောင် ဆောင့်ချလိုက်နဲ့ … မောင်အချစ်ကြမ်းနေပါတယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … နာနေပေမယ့် … မောင်ချစ်တာ အရမ်းကောင်းတယ် … အီစိမ့်နေအောင် … ကောင်းတဲ့ မောင့်ဆောင့်ချက်တွေအောက်မှာ … ကျွန်မပန်းလေး … ကွဲချင်ကွဲပလေ့စေတော့ရှင် … မောင်ဆောင့်တာ ပိုပြီး ထိအောင် … အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးနေမိတယ် … ကော့ပေးတော့လေ … မောင့်ဆောင့်ချက်တွေက ပိုပြီးထိတယ်ရှင့် … ဒါပေမယ့် ကျေနပ်ပါတယ် … နာပေမယ့် အရမ်းကောင်းတော့ … ခြေထောက်တွေကို … လေထဲမှာ ဟိုကန်ဒီကန် ကန်မိပါတယ် … နောက်ဆုံး သုံးချက်လောက်မှာ … မခံနိုင်တော့ဘူးရှင့် … အဝင်အထွက်ကြမ်းနေတဲ့ … မောင့်ဒုတ်ကြီး … တုံ့ကနဲ ဖြစ်သွားအောင် … ညှစ်ပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်မလေ … အရမ်းထန်နေတော့ … ခါးလေးကိုပါ လိမ်ပစ်လိုက်တယ် …
“အား … ဟင့် … ဟင့် … ရှီး … မောင် … မောင် “
ကျွန်မလေ … မောင့်နာမည်ကို အတင်းခေါ်ရင်း … ပန်းလေးထဲက … အရမ်းယားလာပြီး … ပြွတ်ကနဲ … ချစ်ဝတ်ရည်တွေ ထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်းလိုက်တာ … ကာမအရသာရဲ့ အဆုံးသတ် ခံစားမှုက … ကျွန်မရင်တွေ တငြိမ့်ငြိမ့်ပါပဲရှင် … မောင့်ကို … အတင်းဖက်ထားရင်း … မော့ကြည့်လိုက်တော့လေ … မောင့်မျက်နှာမှာ ချွေးတွေ ပြန်နေတယ် … အို … မောင်ရယ် … ချွေးထွက်ရလောက်အောင် … ချစ်ရသလားရှင် … ကျွန်မလေ … မောင့် မျက်နှာပေါ်က … ချွေးလေးတွေကို … သုတ်ပေးလိုက်ပြီး …
“မောင်ရယ် … အရမ်းကောင်းတယ်ကွယ် …”
“ဟုတ်တယ် … မရယ် … အရမ်းကောင်းတယ် … ဒါပေမယ့် … မောင် မပြီးသေးဘူး …”
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင် … ကျွန်မ အရည်တွေ ထွက်တာ ခဏခဏရှင့် … မောင်ကတော့ ပြီးသေးဘူးတဲ့ …
“မောင့် … အရမ်းမောနေရင် … ခဏလောက်နားပါလားကွယ်”
“ဟင့်အင်း … မ ရဲ့ … အဖုတ်က … အရမ်းချလို့ကောင်းတယ် …”
“အို … မောင်ကလည်း …”
ကျွန်မလေ … မောင့်ကို သိပ်ချစ်ပေမယ့် … ဒီလိုမျိုး စကားလုံးကြမ်းကြမ်းတွေကိုတော့ နားရှက်တယ်ရှင့် … ဒါပေမယ့် … မောင် မပြီးသေးတာကို … အားမလိုအားမရဖြစ်မိတယ်ရှင့် … မောင့်ကိုလည်း … ကျွန်မလို … ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုပေးချင်တယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်ကို သိပ်ချစ်သွားတော့ … အတင်းပဲ အောက်ကနေ … ကော့ကော့ပေးတယ် … ညှစ်ပေးတယ် … မောင်လေ … အရမ်းထန်လာတော့ … ကျွန်မ ခါးလေးကို အတင်းမပြီး … ပန်းလေးထဲကို … အတင်းဆောင့်ချနေတော့တာပဲရှင် … ကျွန်မလေ … စက်သေနတ်ပစ်သလို မောင့်အချစ်တွေကြောင့် … ဗလုံးဗထွေးနဲ့ … ငြီးတွားနေပါတယ် …
“အား … ဟာ … ဟာ … မ … မောင် … ပြီးတော့မယ် … ပြီးတော့မယ် …”
အဝင်အထွက်တွေက … မြန်လွန်းလို့ … ကျွန်မ ပန်းလေးကလည်း … မညှစ်နိုင်တော့ဘူးရှင် … ခါးလေးကို ကော့ထားတော့ … ပန်းလေးက … ပိုဟပေးနေသလိုနဲ့ … အရည်တွေ ရွှဲနေတော့ … မောင် ဝင်သမျှ ထွက်သမျှ … အဆင်ချောနေတာပေါ့ရှင် … မောင်လေ … နောက်ဆုံး အချက်မှာ … အတင်းပဲ … ဆောင့်ချလိုက်တာ … ကျွန်မ သားအိမ်ထဲထိ … သူ့ထိပ်ဖျား ဝင်ချလာပါတယ် … ဖွတ်ကနဲ … ဝင်သွားတဲ့ … ခံစားချက်က … ဒီတသက်မမေ့နိုင်တော့ပါဘူး …
“အား … နာတယ် … မောင် … မောင် …”
“ရှီး … ပြီးပြီ … မရေ … ပြီးပြီ … ရှီး … ကောင်းလိုက်တာ မရယ် … ကောင်းလိုက်တာ”
ဟွန့် … မောင်လေ … တဇတ်ဇတ်နဲ့ တကိုယ်လုံးတုန်ပြီး … အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် … အားရလိုက်တာရှင် … မောင်လေ … သူ့ဒုတ်ထဲက … ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ … အရည်တွေက … မီးသတ်ပိုက်လိုပဲ … ပြင်းလိုက်တာ … ပြွတ်ကနဲ … ကျွန်မ ပန်းလေးကို .. နွေးသွားအောင် … ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တာ … ကောင်းလိုက်တာရှင် ကောင်းလိုက်တာ … မောင်လေ … အရည်တွေလည်း ထွက်ပြီးသွားရော … ကျွန်မဘေးမှာ … လှဲချပြီး … မောနေတယ် … ကျွန်မလေ … မောင့် လက်မောင်းပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးပြီး … မောင့်ကို ဖက်ထားရင်း …
“မောင် … အရမ်းမောနေပြီမှတ်လားဟင်”
“မောတော့ မောတာပေါ့ … မ ရယ် … ဒါပေမယ့် မမောဘူး”
“တို့ကို … ချစ်တယ်မှတ်လားဟင်”
“ချစ်တာပေါ့ မရယ် … ချစ်တာပေါ့”
“တို့လည်း မောင့်ကို … အရမ်းချစ်တယ်ကွယ် … မောင်က ဆိုးတယ်နော်”
“အန် … ဘာကို ဆိုးတာလဲ မကလဲ”
“တို့ကို သွေးထွက်အောင် … လုပ်တယ် အရမ်းနာအောင်လုပ်တယ်”
“ဟား ဟား … မကလည်း ကလေးကျနေတာပဲ … မက အပျိုလေးလေ … ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ သွေးထွက်မှာပေါ့ … အရမ်းနာသွားလားဟင်”
“နာတာပေါ့ မောင်ရယ် … အသည်းခိုက်အောင် နာတာပေါ့”
“နာပြီးတော့ … ကောင်းတယ်မှတ်လားဟင်”
“ပြောမပြတတ်အောင် … အရမ်းကောင်းတယ် … ရွှတ်”
ကျွန်မလေ … မောင့်ကို အရမ်းချစ်မိသွားလို့ အသဲယားလွန်းလို့ … အနမ်းတပွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် … မောင်လည်း ကျွန်မကို ပြန်နမ်းပါတယ် … ကျွန်မရဲ့ အပျိုစင်ပန်းလေး မောင်ခူးသွားပြီးနောက် … နဲနဲတော့ ရဲလာပါတယ် … သိပ်ချစ်ရတဲ့ မောင်နဲ့ ချစ်ရတာ သိပ်မဝသေးပါဘူး … တခါမှ မကြုံဖူးသေးတဲ့ ကာမအရသာကို … ကျကျနန ခံစားလိုက်ရတော့ … ရင်ထဲမှာ ဆန္ဒတွေက ပွက်ပွက်ဆူနေပါတယ် … မောင် ချစ်ချင်ရင် ဆက်ချစ်လို့ရပါသေးတယ် … မောင်ရယ် …
“မ … ထပ်ချစ်ချင်သေးတယ်ဗျာ”
“အို … မောင်နော်”
“မ … အဖုတ်က … အရမ်းကြပ်တယ်နော်”
“ဟေ့အေးနော် … မောင် … ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ ပြောနဲ့ …”
“မရဘူးကွာ … မနဲ့ မောင်က … လင်မယားတွေ ဖြစ်နေပြီပဲဟာကို”
“ဟေ့အေးနော် … တို့ နားရှက်တယ် …”
“မရှက်ပါနဲ့ မ ရယ် … မ အဖုတ်လေးကို … ဖြဲပေးထားနော်”
“ဟေ့အေး … ဟေ့အေး”
ကျွန်မလေ … မောင့်အချစ်ကြမ်းကြမ်းတွေ လက်ခံပြီးပြီဆိုပေမယ့် … အဲဒီလို လုပ်ပေးရမှာတော့ ရှက်မိပါတယ် … မောင့်ကို ချစ်တော့လေ … ရှက်ပေမယ့် … ပေါင်လေးကိုသာ ကားပေးလိုက်တယ် … မောင်ကလည်း ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး … မောင်လေ … အရည်တွေ စိုရွှဲနေတဲ့ ကျွန်မပန်းလေးကို … မတ်မတ်မောမောကြည့်ပြီး … မောင့်ဟာကြီးနဲ့ … တေ့လိုက်ပါတယ် …
ငြီးသံလေးကို မတားဆီးနိုင်ခင် … ပါးစပ်ဖျားက ထွက်သွားပါတယ် … မောင့်ဟာက … ကြီးကို ကြီးတာရှင့် … တခါအချစ်ခံပြီးပြီဆိုပေမယ့် … ကျွန်မပန်းလေးက … ကျဉ်းကြပ်နေဆဲပါ … မောင် ထိုးထည့်လိုက်တော့ … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … အတင်းကိုက်ထားရင်း … မောင့်ကို တအားဖက်ထားလိုက်တယ် … နာလိုက်တာ မောင်ရယ် … အရည်တွေကြောင့် … အဝင်ချောပေမယ့် … စပ်ဖျင်းဖျင်း ဒဏ်ရာက … နာလိုက်တာရှင် … မောင်လေ … ကျွန်မကို … နှစ်သိမ့်တဲ့ အနေနဲ့ … အနမ်းတွေ လျှောက်ပေးနေတယ် … တော်ပါ မောင်ရယ် … လူကို ညာပြီး … အရမ်းလုပ်တယ် …. ဟင့် … ကျွန်မလေ .. ပေါင်တွေကို … အတင်းကားပေးလိုက်ပါတယ် … မဆန့်မပြဲ ဝင်ချလာတဲ့ … မောင့်ပစ္စည်းကို … မခံနိုင်ဘူးရှင့် … မောင်က တအားစိတ်ထန်နေပြီနဲ့ တူပါရဲ့ … ကျွန်မကို ဖက်ထားရာကနေ … နည်းနည်းထပြီး … ကျွန်မ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို … ပိုကားပစ်လိုက်ပြီး … ဖိချလိုက်ပါတယ် …
“ဟာ … နာတယ် … မောင် … မောင်”
ကျွန်မပုံစံက … ပက်လက်ကလေး … ဖြစ်နေပြီး … ခြေထောက်တွေက … ဖားလေးလို ကားကားလေး ဖြစ်နေပါတယ် … ကျွန်မဖင်သားကြီးတွေက … အတင်းကော့ပေးနေသလိုဖြစ်နေတော့ … ပိုထိတာပေါ့ရှင် … အစ တချက် နှစ်ချက် … ဖြေးဖြေးလုပ်ပေမယ့် … နောက်ပိုင်း … မောင် ကြမ်းတော့တာပါပဲ … သိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ အနီးကပ် ဆောင့်ချက်တွေက … ကျွန်မ စိတ်တွေ ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်အောင် … ပြင်းထန်လွန်းပါတယ်ရှင် … မောင့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက … ကျွန်မ ပန်းလေးကို နာကျင်စေတယ်ဆိုပေမယ့် … နာကျင်ခြင်းနဲ့ အတူ ခံစားရတဲ့ … အရသာလေးကို … တဖြေးဖြေးနဲ့ နှစ်သက်လာပါတယ် … မောင့်ရဲ့ အနီးကပ်ဆောင့်ချက်တွေကို … ကျွန်မလေ … ကောင်းလွန်းလို့ အောက်ကနေ ပြန်ပြန်ပြီး ပင့်တင်ပေးပစ်လိုက်တယ် … မောင်လည်း ကျွန်မလို ခံစားချက်တွေ ပြင်းထန်လာလို့ နေမှာပေါ့ … ပါးစပ်ထဲက ငြီးတွားသံတွေ ထွက်လာပါတယ် … တို့လုပ်ပေးတာ … ကောင်းရဲ့လား … မောင်ရယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်လည်ပင်းကို အောက်ကနေ အတင်းဖက်ထားရင်း … ကျွန်မတင်ဆိုင်ကြီးတွေကို … မွေ့ယာနဲ့ လွတ်တဲ့အထိ … ကော့ကော့ပေးလိုက်တယ် … မောင်လေ … သဘောတွေ ကျလွန်းလို့ … အားကုန်ဆောင့်တော့တာပဲ …
“အို … ဟာ …. ဟာ”
“ဟင့် … ထိတယ် … မောင်ရယ် … အရမ်းပဲ”
မောင် နည်းနည်းမောလာလို့ ထင်ပါရဲ့ … ကျွန်မကိုယ်ပေါ်ကို နည်းနည်း ပိကျလာပြီး … ဆက်တိုက်ဆောင့်ပါတယ် … မောင့်ရဲ့ ဒုတ်က … ကျွန်မပန်းဖူးလေးကို … ပွတ်ပွတ်ဆွဲသွားတာများရှင် … ကောင်းလိုက်တာ ပြောမနေပါနဲ့ … အသဲထဲမှာ ပြောင်းဆန်သွားတာပဲ … မောင်လေ … အားတက်လာလို့ထင်ပါရဲ့ … ကျွန်မ ရင်နှစ်မွှာကို … အတင်းနယ်တော့တာပဲ …
“အာ … ဟာ …. ဟာ”
“နာတယ် … မောင်ရယ် …”
“တော်ပါတော့ … ဟင့် … ဟင့် …”
ပါးစပ်က တော်ပါတော့ဆိုပေမယ့် … အောက်ကနေ … အတင်းကော့ကော့ပေးနေတာ … ကောင်းလွန်းလို့ပါရှင် … မောင် … ကျွန်မ ရင်သားထိပ်ဖျားလေးကို … ဖိပြီး ချေတော့ … မခံနိုင်တော့ဘူး … စိတ်တွေ အရမ်းထန်လာပြီး … သွေးတွေက ပွက်ပွက်ဆူမတတ် ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ … ကျွန်မလေ … အတင်းအော်ရင်း … ဘယ်လိုဘယ်လို … မောင့်ပေါ်ကို ရောက်သွားမှန်းမသိပါဘူး …
မောင် တအားလည်တယ် … ကျွန်မကိုယ်လေးကို … အတင်းဖက်ထားပြီး … ဆွဲလှည့်လိုက်တော့ … မောင်က အောက်မှာ … ကျွန်မက အပေါ်မှာ … ရှက်လိုက်တာရှင် … ပထမဆုံး စချစ်ကြတဲ့နေ့မှာ … မောင်နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မကို ချစ်နေတော့တာပဲ … ချစ်ပါမောင်ရယ် ချစ်ပါ … မောင် ချစ်သမျှကို လိုက်လျောဖို့ အသင့်ပါပဲ … မောင့်ပေါ်မှာ ကျွန်မ ရောက်တော့လေ … ခံစားချက်က တမျိုးကြီးပဲရှင့် … အောက်ကနေ ထောင်ပြီး တင်းမာနေတဲ့ မောင့်ဒုတ်ကြီးက … ပိုကြီးလာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ် … အတင်းကားထားပေမယ့် … မရဘူးရှင့် … ကျွန်မပန်းလေးက … ပိုကြပ်သွားလိုနဲ့ … မောင့်ဟာကို အတင်းညှစ်ထားပစ်လိုက်တယ် … မောင့်ရင်ခွင်ထဲမှာ … လှဲပြီး မှီနေတဲ့ ကျွန်မကို … မတ်မတ်လေးဖြစ်သွားအောင် … မောင် တွန်းလိုက်ပြီး … ခါးကို ကိုက်ကာ … ဖြေးဖြေးချင်းဆောင့်နည်းလေး သင်ပေးပါတယ် … ကျွန်မ သဘောပေါက်ပါတယ် … မောင့်အကြိုက်လိုက်လျောဖို့ ဖြေးဖြေးလေး … ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်းလိုက်တာ … အောက်ကနေ … ဒုံးပျံလို ထောင်မတ်နေတဲ့ မောင့်ဒုတ်ကို … အပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်ရတာ သိပ်တော့ မသက်သာလှဘူးရှင့် … တချက်တချက် … ကျွန်မ သားအိမ်ကို လာလာဆောင့်တာ အောင့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် … ဒါပေမယ့် ကောင်းလွန်းလို့ … သိပ်ကြာကြာ မဆောင့်နိုင်ပါဘူး … စိတ်ထင် လေးငါးဆယ်ခါလောက်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် … မရတော့ဘူး … ပန်းလေးထဲက … ဝတ်ရည်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ အတူ … ကျွန်မ အော်ငြီးပြီး … အရည်တွေ ပြွတ်ကနဲ ထွက်သွားပါတယ် … ကျွန်မလေ … တကိုယ်လုံး အားယုတ်သွားသလို ဖြစ်ပြီး … နည်းနည်းတော့ အိပ်ချင်လာပါတယ် … မောင် ချစ်လို့ မဝသေးဘူးဆိုတာ … ကျွန်မသိပါတယ် … မောင့်ကို ကျွန်မ ခေါင်းနဲ့ ဝှေ့ပြီး … မှီအိပ်နေရင်း … အပေါ်ကနေ … ဖြေးဖြေးလေး ဆောင့်ပေးပါတယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ပန်းလေးထဲကို ဝင်နေတဲ့ မောင့်ဒုတ်က … သံချောင်းကျနေတာပဲရှင် … မာပြီးတောင့်တင်းနေတဲ့ … မောင့်ဒုတ်က ကျွန်မ ပန်းဖူးလေးကို ခပ်ပြင်းပြင်းပွတ်ဆွဲတာများ … တချက်တချက် ဆွေမျိုးမေ့သွားလောက်တယ် … မောင်လေ … ကျွန်မခါးလေးကို ကိုင်ပြီး … စကောဝိုင်းလို မွှေခိုင်းတယ် … စိတ်ချ မောင်ရေ … မောင့်အကြိုက် … ကျွန်မဖင်လေးကို အနောက်ကို အစွမ်းကုန်ကော့ထားရင်း … စကောဝိုင်းလို မွှေပေးလိုက်တယ် … အား …. ဟာ … ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် … တို့ သိပ်မလုပ်တတ်သေးပေမယ့် … မောင်ကြိုက်မယ် ထင်ပါတယ် … ကြပ်စီးနေတဲ့ ကျွန်မပန်းလေးထဲမှာ … မောင့်ဒုတ်က … အသားနုလေးတွေကို … အီစိမ့်လောက်အောင် … ပွတ်ပွတ်ဆွဲနေတာ … ကောင်းလိုက်တာရှင် …
ကျွန်မ စိတ်တွေ ထိန်းမရအောင် … ကောင်းလွန်းလို့ … မောင့်အပေါ်မှာ … ခပ်ပြင်းပြင်း အဆက်မပြတ်ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ် … မောင်လေ … ရေနစ်တဲ့လူလိုပဲ … အတင်း … ခေါင်းအုံးကို ဆွဲလိုက် … မွေ့ယာခင်းကို ဆွဲလိုက်နဲ့ … ဆောက်တည်ရာမရဘူး ဖြစ်နေတယ် … ဟား ဟား … မှတ်ပြီလား မောင် … သူ့အလှည့်တုန်းက … အသက်ရှူလို့ မရအောင် … လုပ်ခဲ့တာလေ … အခု တို့အလှည့်ရောက်တော့ … မောင် အသက်ရှူမဝတော့ဘူး မှတ်လား … ကျွန်မလေ … မြင်းစီးသလို … ဖင်ကို အနောက်ကို ကော့ထားလိုက် … သိမ့်ကနဲ အပေါ်ကို ရောက်သွားလိုက် … ပြန်ပြုတ်ကျလာလိုက်နဲ့ … ပြောမပြတတ်အောင် … ရမက်ခိုးတွေ ဝေနေပါတယ် … ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မလေ … ဘာမှ မသိချင်တော့ဘူး … မောင့်ကို … အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်က … မောင့်ဒုတ်ကို … ညှစ်ထားတဲ့ ပန်းလေးကို … အဆုံးရောက်တဲ့အထိ … ဖင်လေးကို ပြန်ကြွပြီး … ပစ်ထိုင်ပစ်လိုက်တယ် … အားကနဲ ကျွန်မလေ နာသွားတယ်ရှင့် … ဒါပေမယ့် … အရမ်းကောင်းလွန်းတော့ … မောင့်ဟာကို အဆုံးထိ ထုတ်လိုက် … အဆုံးနားရောက်ခါနီးရင် … သိမ့်ကနဲ ထိုင်ချပစ်လိုက်နဲ့ … မောင်တောင် … အိပ်မနေနိုင်တော့ဘူး … ငေါက်ကနဲ ထထိုင်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတယ်နဲ့ တူတယ် … ဟင်း ဟင်း … ဘယ်ရမလဲရှင် … ကျွန်မ … မောင့် … ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ ဖိထားပြီး … ဆက်တိုက် … ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ် … ဒီနေရာမှာ ကျွန်မ တင်ဆိုင်ကြီးတွေက အရမ်းအသုံးဝင်တာပဲရှင် … ကျွန်မသာ တင်သားသေးသေးလေးဆို … မောင်အားရပါ့မလား မသိပါဘူး …. အခုတော့ … မောင့်အပေါ်ကနေ … သိမ့်ကနဲ ဆောင့်ဆောင့်ချပစ်လိုက်တာ … မောင်အရမ်းသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ် … မောင့်ဒုတ်ကို ညှစ်ထားရင်း … ပြန်ကြွလိုက် … စိတ်ကိုလွှတ်ပေးပြီး … သိမ့်ကနဲ ဆောင့်ချလိုက် … အောက်က မောင်က ပင့်တင်ပေးချိန်နဲ့ အံကိုက် … ဒုန်းကနဲ အဆောင့်ခံရတော့ … ကျွန်မစိတ်တွေ … လေထဲ ဝဲပျံနေပါတယ် … ကျွန်မလေ … ကျွန်မ နာကျင်နေပေမယ့် … အောက်ကနေ တိုးဝင်လာတဲ့ မောင့်ဒုတ်ကို … ယမ်းခါသွားအောင် … တင်သားဆိုင်တွေကို စကောဝိုင်းလို မွှေပေးလိုက်နဲ့ ကျွန်မ စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ရင်း … အရည်တွေက ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ အန်ကျလာပါတယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်ကို အရမ်းဆောင့်ပေးတော့ … မောလိုက်တာရှင် … နည်းနည်းကြာတော့ … ကျွန်မ မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး … အားမရှိတော့ဘူးရှင့် …
“မောနေပြီလား … မရယ်”
“မောတာပေါ့ … မောင်ရယ် … လှုပ်တောင် မလှုပ်ချင်တော့ဘူး”
မောင့်ရင်ခွင်ထဲမှာ လှဲချလိုက်ပြီး … ကျွန်မလေ … မောင့်ရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို နားထောင်ကြည့်လိုက်တယ် … တဒိန်းဒိန်းနဲ့ … မောင့်ရင်ခုန်သံတွေက အကျယ်ကြီးပဲ … မောင်လည်း မောနေပြီနဲ့ တူတယ် … ဟင်း ဟင်း … ကျွန်မကြောင့် မောင့်ရင်တွေ တအားခုန်တယ် ဆိုတာ သိသာပါတယ် … ကျွန်မ ကျေနပ်သွားတယ် … မောင့်ကို ချစ်ခွင့်ပေးလိုက်တာကို … ဘယ်တော့မှ နောင်တမရပါဘူး … ကျေနပ်စွာနဲ့ … မတွန့်တိုတော့ဘူးကွယ် …
“မောရင် … အောက်မှာ ပြန်နေနော် … မောင် အပေါ်က ချစ်မယ်”
“အို … မောင့် …”
မောင်လေ … ကျွန်မကို အတင်းဖက်ထားရင်း … ကိုယ်ကိုလှည့်လိုက်တော့ … ကျွန်မက မောင့်အောက်ကို ပြန်ရောက်သွားတယ် … မောင့် ဒုတ်ကြီးက … ကျွန်မပန်းလေးထဲမှာ … ဝက်အူရစ်လှည့်လိုက်သလိုပါပဲ … နာလိုက်တာရှင် … အပျိုမြှေးလေး ကွဲပြဲပြီး စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်နေတဲ့ အထဲ … ဒီလိုမျိုး ထိုးမွှေလိုက်တော့ … နာလိုက်တာရှင် … နာလွန်းလို့ ကျွန်မ တကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားရင်း … ကျွန်မ တင်ဆုံကြီးက … အပေါ်ကို အတင်းကြွပစ်လိုက်ပါတယ် …
“အား … နာတယ်နော် … မောင့် …”
မောင်လေ … ကျွန်မ ဒီလို အော်လေ … ပိုလုပ်လေပဲ … သူ့ဒုတ်ကို … အတင်းဆွဲထုတ်ပြီး … အတင်းပြန်ထည့်တယ် … နာကျင်လွန်းလို့ ကျွန်မ ပန်းလေးကို … အတင်းညှစ်ထားတဲ့ကြားက … မောင့်ဒုတ်က … တထစ်ထစ်နဲ့ ပြန်ဝင်လာတယ် … အောင်မလေး မောင်ရယ် … နာလိုက်တာနော် … ဟင့် … ရက်စက်လိုက်တာ မောင်ရယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်ကို အတင်းဖက်ထားတော့ … မောင် အသွင်းအထုတ်လုပ်နေတာတွေကို … ရပ်လိုက်တယ် … နာကျင်လွန်းပေမယ့် … မောင်ရပ်လိုက်တော့လည်း … ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ လက်မခံချင်ပါဘူး … မောင့်ကိုလေ … ဆက်လုပ်စေချင်ပါတယ် … မောင် ဘာလုပ်မလို့လဲဟင် … ကျွန်မလေ … မောင့်ကို မော့ကြည့်တော့ … မောင်က ဘေးနားက … ခေါင်းအုံးတလုံးကို … ကျွန်မ ဖင်အောက်ထဲ ထည့်လိုက်တယ် … ကျွန်မဖင်တွေက … အတင်းထောင်ပေးသလို ဖြစ်သွားတယ်ရှင့် … ပန်းလေးက အတင်းကော့ပေးသလို ဖြစ်နေရင်း … မောင့်ဒုတ်က … အတွင်းသား နက်နက်ကို … ပိုထိလာသလို ခံစားရပါတယ် … သေပြီ မောင်ရေ … တို့တော့ … သေပါပြီကွယ် …
“အား … မောင်နော် … ဖြေးဖြေးလုပ်နော် … ဟင့်”
“အရမ်းထိတယ် … မောင်ရယ် … အရမ်းနာတယ် … ဟာ …. ဟာ …. အူး …. ဟင့် … ရှီး”
ရမက်သံတွေ လျှံထွက်လာအောင် … မောင်လေ … အသွင်းအထုတ် … အထိုးအမြှုပ်လေးတွေ လုပ်ပေးတာ … အရမ်းကောင်းတယ်ရှင် … ကျွန်မကလည်း ကျွန်မပဲရှင် … ဖင်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးခံထားလို့ … ကော့ပေးထားသလို ဖြစ်နေတဲ့ကြားက … မနေနိုင်တော့ဘူးရှင် … ခြေဖဝါးကို မွေ့ယာပေါ်မှာ အားပြုပြီး … အတင်းကော့ကော့ပေးနေတယ် … မောင်ရယ် … ဘယ်လိုများ … တို့ကို ချစ်နေတာလဲကွယ် … ပန်းလေးထဲက … စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ယားလွန်းလို့ … မနေနိုင်တော့ဘူးကွယ် …
“အို … အမေ့ … ဟာ …. ဟာ”
“အရမ်းမကြမ်းနဲ့ … မောင်ရယ် “
“နာတယ်နော် … မောင့် …. ဟာ … ဟာ … ရှီး”
“ဟာ … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … အဲဒီလို မမွှေနဲ့လေ … အား …. ရှီး”
ချစ်တာကြမ်းလိုက်တာ မောင်ရယ် … မောင်လေ … ကျွန်မခါးကို ကိုင်ပြီး … အတင်း ဆောင့်တာ … မောင့်ရဲ့ အနီးကပ်ဆောင့်ချက်တွေက … ကျွန်မ မခံနိုင်တော့ဘူး … ရုန်းလို့လည်း မရတော့ … ခေါင်းကိုသာ အတင်းခါရင်း … မောင့်လက်မောင်းကို … အတင်းဆုပ်ကိုင်ထားရတော့ပါတယ်ရှင် … လုပ်ပါတော့ မောင်ရယ် … သေအောင်သာ လုပ်လိုက်တော့ … မောင်နော် … ခံစားချက်တွေ ရမက်မီးတွေက … ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေလို့ … ကျွန်မလေ … အရမ်းပဲ ငြီးတွားနေမိပါတယ် … မောင်ရဲ့ မျက်နှာကလည်း နီရဲတွတ်နေတာပဲ … ကြိုက်ရဲ့လားဟင် … မောင် …
“ဟာ … ရှီး”
ကျွန်မ … မခံနိုင်တော့ဘူး … ထွက်တော့မယ် … ထွက်တော့မယ် … ပန်းလေးထဲက … တဆစ်ဆစ်နဲ့ … အတင်းညှစ်ထားရင်း … တရစ်ပြီး တရစ်တက်လာတဲ့ … ကာမစိတ်အပြင်းထန်ဆုံးအချိန်ကို … ဘယ်လိုမျိုးအဆုံးသတ်ရမှာလဲရှင် … မခံနိုင်တော့ဘူး မောင့် …. မောင့်ဟာကို … အတင်းညှစ်ထားရင်း … ပြွတ်ကနဲ ထွက်သွားပါတယ် … မိနစ်ဝက်လောက် ကြာချိန်လေး အတွင်းမှာ … ကျွန်မစိတ်တွေ … နတ်ပြည်ကို ရောက်သွားသလိုပါပဲ … ငြိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ … ထူးကဲတဲ့ … ကာမအရသာက ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်းလိုက်တာ … ကောင်းလွန်းလို့ … တကိုယ်လုံးလည်း အားမရှိတော့ပါဘူး … မျက်စိဖွင့်ဖို့တောင် အားမရှိတော့လို့ … မှေးနေရင်း … မောင့်ရဲ့ အဆုံးသတ်ဆောင့်ချက်တွေကို … အောက်နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်ပြီး … မောင့်ဒုတ်ကြီးထဲက … ပန်းထွက်လာတဲ့ … အရည်ပူပူတွေကို … ပန်းလေးထဲက တရစ်ရစ်စုပ်ယူရင်း … တညလုံး မောင်ချစ်သမျှ … အလိုလိုက်ရင်း … မိုးစင်စင်လင်းသွားပါတော့တယ်ရှင် …